မတူကွဲပြားသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သည့်ဘာသာရပ်များအတွက်အဟာရပြည့်ဝသောအခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု (2016) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016)
comments: ဤလေ့လာမှုတွင်အခြားသူများနည်းတူ“ Compulsive Sexual Behaviour” (CSB) သည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဟုဆိုလိုသည်။ CSB ဘာသာရပ်များသည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၂၀ နီးပါးညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ကို ၂၉ မိနစ်ခန့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ CSB ဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၃ ခုသည်“ orgasm-erection disorder” ခံစားခဲ့ရသည်။
အဓိကတွေ့ရှိချက်: အစာစားချင်စိတ်အေးစက်နှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်သည့် CSB အုပ်စုတွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအေးစက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများက“ဤရွေ့ကား [ပွောငျးလဲ] စွဲရောဂါနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။ " တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများနှစ်ခုရှိပါတယ်။
တိ Klucken, Ph.D , Sina Wehrum-Osinsky, Dipl-psyche, J ကိုတစ်ဦး Schweckendiek, Ph.D, Onno Kruse, M.Sc, Rudolf Stark, Ph.D
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ၏ etiology ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအစာစားချင်စိတ်အေးစက် CSB ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အရေးပါသောယန္တရားဖြစ်စေခြင်းငှါ facilitated ယူဆနေသည်, သို့သော်အရှင်ဝေးမျှလေ့လာမှုကဤလုပ်ငန်းစဉ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
အုပ်စုနှစ်စု (CSB နှင့် 20 ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 20 ဘာသာရပ်များ) တစ်ဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းတစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်အေးစက်ပါရာဒိုင်းထိတွေ့ခဲ့သည်, တစ်ဦးကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (CS +) အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဟောကိန်းထုတ်နှင့်ဒုတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု (CS-) မထားတဲ့အတွက်။
အသွေးသည်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခိုတုံ့ပြန်မှုများနှင့် psychophysiologic အပြန်အလှန်။
အဓိကရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့ CS- vs အဆိုပါ CS + အဘို့အစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နေစဉ်အတွင်းတိုးလာ amygdala လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိခဲ့နှင့် CSB vs ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအတွက် ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားနားချင်းဆက်မှီလျော့နည်းသွားသည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်နှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ် CSB နှင့်အတူလူနာအတွက်ပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။ အဆိုပါတိုးမြှင့် amygdala activation CSB နှင့်အတူလူနာအတွက်သင်တန်းနည်းပြအေးစက်ဖြစ်စဉ်များရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်လေ့လာတွေ့ရှိလျော့နည်းသွားနားချင်းဆက်မှီကဒီအုပ်စုထဲမှာချို့ယွင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းအောင်မြင်မှုများအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
Key ကိုစကား: Amygdala, conditioning, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း, အပြုသဘောဆောင်သော, ဆု, လိင်စိတ်နိုးထ
(စမတ်ဖုန်းများကဥပမာ) Internet နှင့် streaming များန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ဝင်ရောက်ဖို့အသစ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အမည်မသိနည်းလမ်းတွေပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ SEM မှထိတွေ့မှု, ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိကျတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများကလိုက်ပါသွားသည်။1, 2, 3, 4, 5, 6,72013 အတွက်ဗြိတိန်မှာလေ့လာဆန်းစစ်အင်တာနက်ကိုအသွားအလာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10% အားလုံးလူမှုကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးအသွားအလာကိုကျော်လွန်ကြောင်းအရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။8 အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအွန်လိုင်းမှမေးခွန်းလွှာလေ့လာမှုလေးအချက်များ-ဆက်ဆံရေးစိတ်ဓါတ်များစီမံခန့်ခွဲမှု, လေ့အသုံးပြုမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။9 အဆိုပါအများစုအထီးအသုံးပြုသူအများဆုံးသူတို့ရဲ့ SEM စားသုံးမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာများရှိသည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောယောက်ျားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတွက်ရရှိလာတဲ့, အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးလျက်, ပြဿနာအပြုအမူလျော့သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့နိုင်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) အဖြစ်၎င်းတို့၏အပြုအမူကိုဖော်ပြရန် စီးပွားရေးအရ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများရန်။ ဒီလူကိုမကြာခဏအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သော်လည်း "လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲ," CSB ၏သဘောသဘာဝနှင့်စိတ်ကူးနှင့် ပတ်သက်. ယှဉ်ပြိုင်သီအိုရီရှိပါတယ်။ တချို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ်ဤအပြုအမူအနက်ကြပါပြီ,10 ခံစားချက်စည်းမျဉ်းလိုငွေပြမှု, obsessive-compulsive ရောဂါ,11 သို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွဲရောဂါ,12 အခြားသူတွေဟူသောဝေါဟာရကို အသုံးပြု. etiologic အသင်းအဖွဲ့များရှောင်ရှားကြသော်လည်း Non-paraphilic hypersexuality ရောဂါ။13 အခွားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးယေဘုယျအားဖြင့်ကွဲပြားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဘို့လိုအပ်ကြောင်းစိန်ခေါ်ပါပြီ။14, 15 ထို့ကြောင့်, CSB များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး neurobiological စမ်းသပ်ချက်အခြေခံယန္တရားထဲသို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ရန်အရေးကြီးလှသည်။
ဒါဟာ facilitated စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်စှဲနဲ့နောက်ထပ်စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါယန္တရားဖြစ်အံ့သောငှါအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။16, 17 တစ်စက္ကန့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (CS-) သည် UCS ၏မရှိခြင်းခန့်မှန်းနေချိန်မှာအစာစားချင်စိတ်အေးစက် Paradigm ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (CS +) တစ်ခုအစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု (UCS) နဲ့တွဲဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုတွေပြီးနောက်, CS + preference ကို ratings ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပြောင်းလဲအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောတိုးမြှင့်အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှု (SCRs) အဖြစ် conditional တုံ့ပြန်မှု (CRS) elicits ။16, 18, 19 အစာစားချင်စိတ်အေးစက်၏အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့ကွန်ရက် ventral striatum, amygdala, orbitofrontal cortex (OFC), insula, anterior cingulate cortex (ACC), နှင့် occipital cortex ပါဝင်သောဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။20, 21, 22, 23, 24 ထို့ကွောငျ့ ventral striatum ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျှော်လင့်, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သင်ယူမှုအတွက်၎င်း၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ၏အစာစားချင်စိတ်အေးစက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။25, 26 သို့သော် ventral striatum မတူဘဲအတွက်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်များအတွက် amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ များစွာသောတိရစ္ဆာန်အများနှင့်လူ့လေ့လာမှုများပေမယ့်ထပ်တလဲလဲကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက်အလယ်ပိုင်းဒေသအဖြစ် amygdala ကိုအတည်ပြုကြပါပြီ,27 အစာစားချင်စိတ်အေးစက်အတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသာမရှိသလောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီက, တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ amygdala စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုများအပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသရုပ်ပြပြီ, အစာစားချင်စိတ်အေးစက်နှင့် CSB ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုသုံးနိုင်သည်။28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ဥပမာ Gottfried et al29 UCS အဖြစ်သာယာသောအနံ့များကို သုံး၍ လူ့အစာစားလိုသောအေးစက်ချိန်အတွင်း CS + vs CS + သို့ amygdala ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ OFC, insula, ACC နှင့် occipital cortex များတွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုလှုံ့ဆော်မှု၏နက်ရှိုင်းသောအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်မကြာခဏအနက်ဖွင့်ကြသည်။16
ယနေ့အထိ, နှစ်ခုသာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများ CSB ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် amygdala နှင့် ventral striatum အတွက်တိုးမြှင့ activations အဖြစ်ဆက်စပ် (လိင်) တွေကို၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ပြောင်းလဲအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။35, 36 ဤရွေ့ကားအဆောက်အ ဦ စွဲရောဂါနှင့်အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ကြသည်။37, 38 ဥပမာအားဖြင့် meta-analysis သည်တွေ့ရှိချက်များသည် amygdala activation နှင့်တပ်မက်မှုပြင်းထန်မှုအကြားသိသာသောဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။37 ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လေ့လာမှု CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal ဒေသများရှိတိုးမြှင့်အဖြူကိစ္စ microstructure သမာဓိရှိနှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက် CSB နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။39
အစာစားချင်စိတ်အေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အရေးပါမှုအပြင်, ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏တားစီးအတွက်ချို့ယွင်းအများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။40, 41 ဆက်စပ်တွေကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတားစီးနှင့်အတူဤအအခက်အခဲများ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအာရုံကြောထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏ဆက်စပ်မှုနှင့်၎င်း၏စည်းမျဉ်း, အ ventral striatum နှင့်စပ်လျဉ်းနှင့် prefrontal cortex (vmPFC) ventromedial အရေးကြီးသောရန်ဖြစ်ဟန်: အ ventral striatum ထကြွလွယ်သောအပြုအမူစတင်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ယူဆနေသည်၎င်း၏ downregulation အပြန်အလှန်မှတဆင့် vmPFC မောင်းနှင်နေသည်သော်လည်း ဆက်သွယ်မှု။42 ဥပမာအားဖြင့်ယခင်ရလဒ်များကို Impulse နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူမှစရိုက်များမှချို့ယွင်း ventral striatal နှင့် prefrontal ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။42, 43
သို့သော်အရှင်ဝေးမျှလေ့လာမှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အစာစားချင်စိတ်သင်ယူမှုယန္တရားများသို့မဟုတ် CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အစောပိုင်းကကိုးကားစာပေအပေါ်အခြေခံပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ပထမဦးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကတစ်လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤဘာသာရပ်များအတွက်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် amygdala နှင့် ventral striatum အတွက်တိုးချဲ့ဖွင့်သုံးတွေးဆ။ ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်မှာအုပ်စုနှစ်စုအကြားဆက်သွယ်မှုကွဲပြားခြားနားမှုစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ဤအဘာသာရပ်များအတွက်ပြောင်းလဲစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ၏အာရုံကြောအလွှာဖော်ထုတ်ဥပမာသိမြင်မှုအမူအကျင့် (ဒီအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနားလည်ပေမယ့်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများမှတဆင့်အမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအာရုံစိုက်ထားတဲ့ကုသမှုမဟာဗျူဟာများ, အဘို့မသာသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့ ကုထုံး) ။44
CSB နှင့်လိုက်ဖက်သောထိန်းချုပ်မှု ၂၀ ရှိအမျိုးသားနှစ်ဆယ်သည်သိပ္ပံနည်းကျအပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်ဒေသပြင်ပလူနာဌာန၏ကြော်ငြာနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များအပြီးတွင်ကိုယ်တိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ဇယား ၁) ။ ပါ ၀ င်သူအားလုံးသည်ပုံမှန် (သို့) ပုံမှန်ပုံမှန်အမြင်ရှိခဲ့ကြပြီးအသိပေးအကြောင်းကြားစာကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုကိုဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်နှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများအားလုံး Axis I နှင့် / သို့မဟုတ် Axis II diagnoses ရှာဖွေရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလက်တွေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများကိုခံယူခဲ့သည်။ CSB ရှိခြင်းဟုသတ်မှတ်ထားသောပါဝင်သူများသည် CSB အတွက်လိုက်ဖက်သော hypersexuality အတွက်သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုသည်13:
1 ။ အနည်းဆုံး6လ, မှုများထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအောက်ပါငါးသတ်မှတ်ချက်အနည်းဆုံးလေးယောက်နှင့်အတူဆက်နွယ်ရပါမည်:
တစ်ဦး။ အလွန်အကျွံအချိန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ရမ္မက်အားဖြင့်၎င်း, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်စားသုံးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး
ခ။ အထပ်ထပ်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာတိုကျတှနျးထားသပါဝငျနှင့် dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များမှတုန့်ပြန်အပြုအမူ
က c ။ အထပ်ထပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာတိုကျတှနျးထားသပါဝငျနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်အပြုအမူ
ဃ။ ထပ်ခါထပ်ခါပေမယ့်မအောင်မြင်ထိန်းချုပ်ဖို့သို့မဟုတ်သိသိသာသာသည်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်လျော့ချဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ
2 ။ ဆေးခန်းသိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းသောဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ, လူမှုရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောဒေသများအတွက်တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ
3 ။ ဤရွေ့ကားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူဟာ exogenous တ္ထုများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စဉ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ, သို့မဟုတ် Manic ဖြစ်စဉ်များကြောင့်မဟုတ်
4 ။ အသက်အရွယ်မှာအနည်းဆုံး 18 နှစ်ပေါင်း
CSB နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့များအတွက်ဇယား 1Demographic နှင့် Psychometric တိုင်းတာမှုများ*
အသက်အရွယ် 34.2 (8.6) 34.9 (9.7) t = 0.23, P = .825
BDI-II ကို 12.3 (9.1) 7.8 (9.9) t = 1.52, P = .136
အချိန်အချိန် SEM, မိ / ပတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည် 1,187 (806) 29 (26) t = 5.53, P <.001
MD ဇာတ်လမ်းတွဲ41
မှုများထပ်တလဲလဲ MD ရောဂါ 4
လူမှု phobia 1
တိကျတဲ့ phobia 1 1
Somatoform ရောဂါ 1
ဝင်ရိုး II ကိုရောဂါ
Narcissistic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ 1
Amitriptyline ဆေး 1
BDI = Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory; CSB = အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ MD = အဓိကစိတ်ကျရောဂါ; SEM = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း။
*ဒေတာကိုဆိုလိုမှု (SD) အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်။
fMRI လုပ်ဆောင်စဉ်အေးစက်စေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ စမ်းသပ်မှု ၄၂ ခုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအေးစက်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (CS နှုန်း ၂၁ ခု) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရောင်စုံရင်ပြင်နှစ်ခု (အပြာရောင်၊ အဝါရောင်တစ်ခု) သည် CS အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး CS + နှင့် CS- များအနေဖြင့်ဘာသာရပ်များကိုဟန်ချက်ညီညီထိန်းညှိပေးခဲ့သည်။ CS + တွင် ၂၁ ခုတွင် ၁၀၀% အားဖြည့်ခြင်း ၁ ခုပါ ၀ င်သည်။ ပုံအားလုံးသည်စုံတွဲများ (ယောက်ျားတစ် ဦး နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အစဉ်အမြဲရှိသည်) ကိုရှင်းလင်းစွာလိင်မြင်ကွင်းများ (ဥပမာနေရာအမျိုးမျိုးတွင်အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကျင့်သုံးခြင်း) ကိုပြသပြီး 42 × 21 pixel resolution ဖြင့်အရောင်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုများကို LCD projector ကို အသုံးပြု၍ စကင်နာ (visual field = 1 °) ၏အဆုံးတွင်မြင်ကွင်းပေါ်သို့ projected ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ပုံများကို ဦး ခေါင်းကွိုင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောမှန်များမှတဆင့်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ CS ကြာချိန်မှာ ၈ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ erotic ဓာတ်ပုံများ (UCS) သည် CS + (၁၀၀% အားဖြည့်ခြင်း) ပြီးနောက် ၂.၅ စက္ကန့်တွင်ချက်ချင်းပေါ်လာပြီးနောက် ၁၂ လမှ ၁၄.၅ စက္ကန့်ကြားကာလကြားဖြတ်။
အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေတစ် Pseudo-ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်: အဆိုပါတူညီသော CS ဆက်ခံကျော်နှစ်ကြိမ်တင်ဆက်မခံခဲ့ရပါဘူး။ အဆိုပါနှစ်ဦးကို CS ဝယ်ယူ၏ပထမနှင့်ဒုတိယရှက်အတွက်အညီအမျှမကြာခဏတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ သင်ယူမှုသေးတစ်ခုစီကို CS များအတွက် 20 စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုစမ်းသပ်မှုတွေ (တဦးတည်း CS + ရုံးတင်စစ်ဆေး, တဦးတည်း CS- ရုံးတင်စစ်ဆေး) ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။45
ပုဂ္ဂလဒိဋ္ Ratings အဖွဲ့
စမ်းသပ်မှုမစတင်မီနှင့်အေးစက်စေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြီးတွင်သင်တန်းသားများသည် CS +, CS- နှင့် UCS တို့၏ valence, arousal, နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုများကို ၉ မှတ် Likert စကေးနှင့် ၁၀ မှတ် Likert စကေးဖြင့် UCS ၏သက်တမ်းကိုသတ်မှတ်ကြသည်။ CS အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းကိုကှဲလှဲမှု (ANOVA) အား ၂ (CS type: CS + vs CS-) ×9(အချိန် - မတိုင်မီ vs အပြီးဝယ်ယူခြင်း) မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ × ၂ (အုပ်စု - CSB နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု) ပုံစံနောက်သို့လိုက်ခြင်း။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် SPSS 10 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) တွင် post-hoc စစ်ဆေးမှုများအားဖြင့်။ နောက်ထပ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်လျော်သော post hoc t-tests ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများအဘို့, အုပ်စုနှစ်ခုကွဲပြားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့နှစ်ခုနမူနာ t- စမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အရေပြား conduction တိုင်းတာခြင်း
အဆိုပါ SCRs non-ကြီးစိုးလက်ဝဲဘက်၌နေရာချ isotonic (NaCl 0.05 mol / L) ကို Electrolyte တွေအလတ်စားနှင့်ပြည့်စုံ Ag-AgCl လျှပ်သုံးပြီးနမူနာခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး SCR လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းပြီးနောက်တစ်ခုတည်း phasic တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ CS စတင်ခြင်းဟာ 1 အတွင်းဒုတိယကြားကာလတုံ့ပြန်မှု (Sir) အဖြစ်စက္ကန့်4ဖို့အကြောင်း, ပထမဦးဆုံးကြားကာလတုံ့ပြန်မှု (ထင်းရူး) အဖြစ်သတ်မှတ်နှင့်အတွင်း၌ခံခဲ့ရပြီးနောက်စက္ကန့်4ဖို့ 8 အတွင်းနိမ့်ဆုံးနှင့်နောက်ဆက်တွဲအများဆုံးအကြားထို့ကြောင့်အကြီးဆုံးခြားနားချက် တတိယကြားကာလတုံ့ပြန်မှု (TIR) ​​အဖြစ်စက္ကန့်9မှ 12 ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပြတင်းပေါက်အတွင်းတုံ့ပြန်မှု Ledalab 3.4.4 အသုံးပြု. ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။46 ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုဒေတာ၏ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူး၏ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ရန် log (μS + 1) အသွင်ပြောင်းနေကြသည်။ ဘာသာရပ်ငါးခု (CSB သုံးခုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု) သည်မည်သည့် SCRs (UCS အပေါ်တုန့်ပြန်မှုတိုးလာသည်) ကိုမပြသခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ SCR များကို ANOVA မှ SPSS2ကို အသုံးပြု၍ post hoc စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ၂ (CS type: CS + vs CS-) ×2(group: CSB vs control group) တွင်ဒီဇိုင်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
Functional နှင့်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာပုံရိပ်များကို ၁.၅-Tesla တစ်ကိုယ်လုံး tomograph (စံပြခေါင်းစဉ်ကွိုင်) နှင့်အတူ Siemens Symphony; Siemens AG, Erlangen, Germany နှင့်အတူရရှိခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်ရရှိမှုသည် T1.5 အလေးချိန်ရှိသော 160 sagittal ပုံရိပ်များ (magnetization မြန်ဆန်စွာရယူခြင်း gradient ပဲ့တင်သံ; 1-mm အချပ်အထူ; အထပ်ထပ်အချိန် = 1 စက္ကန့်; ပဲ့တင်သံအချိန် = 1.9 ms; မြင်ကွင်း = 4.16 × 250 mm) ။ အဆိုပါအေးစက်တည်ငြိမ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်း 250 ပုံရိပ်တွေကို ဦး တည်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ် 420 အချပ်နှင့်အတူ T2 * အလေးချိန် gradient ကိုပဲ့တင်သံ e-planar ပုံရိပ် sequence ကိုအသုံးပြု။ ဝယ်ယူခဲ့ကြသည် (အချပ်အထူ = 25 မီလီမီတာ; ကွာဟမှု =5မီလီမီတာ; ဆင်းအချပ်အမိန့်; ထပ်ခါတလဲလဲအချိန် = 1 စက္ကန့်; ပဲ့တင်သံ = 2.5 ms; လှန်ထောင့် = 55 °; မြင်ကွင်း = 90 × 192 မီလီမီတာ; matrix ကိုအရွယ်အစား = 192 × 64) ။ မပြည့်စုံသော magnetization ဖြစ်သောကြောင့်ပထမ volumes နှစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ MATLAB 64 (Mathworks Inc. , Sherbourn, MA, USA) တွင်အကောင်အထည်ဖော်သည့်အချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်းစံနစ်မြေပုံ (SPM8, Wellcome Department of Cognitive Neurology, London, UK; 2008) ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမီ, ဒေတာ preprocessed ခဲ့ကြသည်, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း unwarping (ခ -pline interpolation), အချပ်အချိန်ဆုံးမပဲ့ပြင်, ပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်မှအလုပ်လုပ်တဲ့အချက်အလက်များ၏ပူးတွဲမှတ်ပုံတင်နှင့် Montreal အာရုံကြောအင်စတီကျု ဦး နှောက်၏စံအာကာသမှပုံမှန်။ Spatial ချောချောမွေ့မွေ့မှန်ကန်သောစာရင်းအင်းအခြခွင့်ပြုပါရန် isotropic သုံးဖက်မြင် Gaussian filter ကိုနှင့်အတူအကျယ်အပြည့်နှင့်တစ်ဝက်အများဆုံး 7.5 မီလီမီတာမှာကွပ်မျက်ခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးအဆင့်အထိတွင်အောက်ပါထူးခွားသညျ့တစျခုစီဘာသာရပ်များအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်: CS + CS-, UCS နှင့် Non-UCS (CS- တင်ဆက်မှုကတော့ CS + ပြီးနောက် UCS တင်ဆက်မှု၏အချိန်ပြတင်းပေါက်မှသက်ဆိုင်ရာပြီးနောက်အချိန်ပြတင်းပေါက်အဖြစ်သတ်မှတ်47, 48, 49) ။ Regressor တစ်ခုစီအတွက်တုတ်ချောင်းတစ်ခုကိုရွေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို regressor အခြားသူများနှင့်လွတ်လပ်သောခဲ့ shared ကှဲလှဲ (cosine ထောင့် <0.20) မပါဝင်ခဲ့နှင့် hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုနှင့်အတူ convolved ခဲ့သည်။ အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ရရှိသောတင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်း၏ခြောက်လလှုပ်ရှားမှု parameters တွေကိုမော်ဒယ်အတွက် covariates အဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ voxel-based time series များကို high-pass filter (time constant = 128 စက္ကန့်) ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်။ အကျိုးစီးပွားခြားနားချက်များ (CS + vs CS-; CS- vs CS +; UCS vs non-UCS; non-UCS vs UCS) ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်သီးခြားစီသတ်မှတ်သည်။
နှင့်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှု; ဒုတိယအဆင့်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးအဘို့, one- နှင့် Two-နမူနာ t-စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန် (Non-UCS vs UCS CS- vs CS +) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒေသ-of အကျိုးစီးပွား (Roi) ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်စာရင်းအင်းပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုပြင်းထန်မှုတံခါးခုံနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည် P = .05 (မမှန်ကန်သော), = =5နှင့်အရေးပါမှုတံခါးခုံကို (P = .05; familywise အမှား, = =5များအတွက်တညျ့နှင့်မြေတပြင်လုံး - ဦး နှောက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှာတံခါးခုံနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည် P = .001 နှင့်>> 10 voxels ။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPM8 နှင့်အတူတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
UCS ratings နှင့် BDI ရမှတ်များမအုပျစုကွဲပြားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပေမယ့် covariates UCS အတွေ့အကြုံများနှင့် comorbidity ၏အလားအလာဖွငျ့သက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင့်အဖြစ်ကျနော်တို့ UCS ratings နှင့် BDI ရမှတ်များအပါအဝင်နောက်ထပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များနီးပါးတည်ငြိမ်ကျန်ရစ် (; အစီရင်ခံအုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုသိသိသာသာကျန်ရစ်ခြင်းမရှိထပ်မံအုပ်စုသည်ကွဲပြားမှု) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ရွယ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ခန္ဓာဗေဒမျက်နှာဖုံးများ (2,370 မီလီမီတာ3), insula (10,908 မီလီမီတာ3), occipital cortex (39,366 မီလီမီတာ3), နှင့် OFC (10,773 မီလီမီတာ3) မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် ဟားဗတ်-အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် cortical နှင့် Subcortical ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Atlases (http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/AtlasesMorphometric အားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ventral striatum မျက်နှာဖုံး (25 မီလီမီတာများအတွက်ဟားဗတ်ရေးစင်တာတို့ကထောက်ပံ့ပေး) (3,510% ဖြစ်နိုင်ခြေ)3BrainMap ဒေတာဘေ့စ်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသောလူ့ ဦး နှောက်စီမံကိန်း Repository ဒေတာဘေ့စ်မှ) ။ ဟားဗတ် - အောက်စဖို့ဒ် atlas သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဘာသာရပ် ၃၇ ခု (N = ၁၆ အမျိုးသမီးများ) ၏ T1 အလေးချိန်ရှိသောပုံရိပ်များကိုအခြေခံထားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောမြေပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ vmPFC မျက်နှာဖုံး (37 မီလီမီတာ3) Marina နှင့်အတူဖန်တီးခဲ့50 အများအပြားယခင်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။51, 52, 53, 54
Psychophysiologic Interaction အားသုံးသပ်ခြင်း
Psychophysiologic အပြန်အလှန် (PPI) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ,55 အရာတစ်ခုစမ်းသပ်တာဝန်, ဒါခေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကို (CS- vs CS +) ကအမျိုးအနွယ်ကိုဒေသနှင့်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများအကြားဆက်သွယ်မှုများ၏မော်ဂျူလေ့လာကောက်ယူခဲ့သည်။ အမျိုးအနွယ်ဒေသများသည် ventral striatum နှင့် amygdala, ထိုအသုံးပြုသော ROIs (အထကျကိုကြည့်ပါ) ပေါ် အခြေခံ. နှစ်ဦးကိုသီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက် prespecified ခဲ့ကြသည်။ SPM8 အကောင်အထည်ဖော်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအမြိုးအနှယျဒေသများအတွက်ပထမဦးဆုံး eigenvariate ထုတ်ယူ။ ထို့နောက်အပြန်အလှန်သက်တမ်းတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကို (CS- vs CS +) နှင့်အတူ eigenvariate ပွားနှင့် haemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူက convolving အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအဆင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအကျိုးစီးပွား regressor (PPI regressor) နှင့်စိတ်အညစ် regressors အဖြစ် eigenvariate အဖြစ်တာဝန် regressor အဖြစ်အပြန်အလှန်သက်တမ်းအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။55 ဒုတိယအဆင့်တွင် CSM အုပ်စုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုအကြားဆက်သွယ်မှုတွင်အုပ်စုကွဲပြားမှုများ (PPI regressor) ကိုဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး vmPFC နှင့် ROI အဖြစ်နမူနာနှစ်ခုကို t-tests သုံး၍ လေ့လာသည်။ စာရင်းအင်းပြင်ဆင်ချက်သည်ယခင် fMRI ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်တူသည်။
ANOVA valence များအတွက် CS အမျိုးအစားသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှု (F ကိုပြသ1, 38 = 5.68; P <0.05), နှိုးဆွ (F1, 38 = 7.56; P <.01), လိင်စိတ်နှိုးဆွ (F1, 38 = 18.24; P <.001), နှင့် UCS မျှော်မှန်း ratings (F1, 38 = 116.94; P <.001) ။ ထို့အပြင်သိသာထင်ရှားသော CS အမျိုးအစား×အချိန်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ valence အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်1, 38 = 9.60; P <.01), နှိုးဆွ (F1, 38 = 27.04; P <.001), လိင်စိတ်နှိုးဆွ (F1, 38 = 39.23; P <.001), နှင့် UCS မျှော်မှန်း ratings (F1, 38 = 112.4; P <.001) ။ Post hoc စစ်ဆေးမှုများသည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင် CS + နှင့် CS− အကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု (CS + နှင့် CS- အကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု) ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ CS + သည် CS- နောက်ပိုင်းတွင်သိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုနှိုးဆွသော၊P <နှိုင်းယှဉ်မှုအားလုံးအတွက် <.01), ဒါပေမယ့်အုပ်စုနှစ်ခုအတွက်အောင်မြင်သောအေးစက်ကိုညွှန်း, ဝယ်ယူအဆင့်မတိုင်မီမဟုတ် (ပုံ 1) ။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှု (ဤကွဲပြားခြားနားမှုတိုးလာ CS + ရမှတ်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ပြသခဲ့သည်နှင့်အချိန်ကျော် CS- ရမှတ်များလျော့နည်းသွားP <အားလုံးနှိုင်းယှဉ်ဘို့ .05) ။ valence နှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စုကွဲပြားမှုမရှိပါP = .92) နှင့် arousal (P အဆိုပါ UCS ၏ = .32) ratings (အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု) ။
အုပ်စုနှစ်ခုသီးခြားစီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (CS + vs CS-) ။ အမှားဘားများသည်ယုတ်၏စံမှားယွင်းမှုများကိုပြသည် CS- = အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု -; CS + = အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု +; CSB = အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။
အကြီးစားပုံရိပ် View | PowerPoint Slide Download
အရေပြား conduction တုံ့ပြန်ချက်
ANOVA ထင်းရူး (က F အတွက် CS အမျိုးအစားအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်1, 33 = 4.58; P <.05) နှင့် TIR (F1, 33 = 9.70; P <.01) နှင့် SIR (F ။ ) တွင်လမ်းကြောင်းသစ်1, 33 = 3.47; P = ဖေါ်ပြခြင်း .072) ကို CS- နှင့်နှိုင်းယှဉ်အသီးသီး, အ CS + သို့နှင့် UCS မှ SCRs တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်စု၏အဘယ်သူမျှမအဓိကသက်ရောက်မှုထင်းရူးအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် (P = .610), SIR (P = .698), သို့မဟုတ် TIR (P = .698) ထို့အပြင် CS အမျိုးအစား×အုပ်စုလိုက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို FIR တွင်မတွေ့ရပါ။P = .271) နှင့် TIR (P မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ် (ထင်းရူး, Sir နှင့် TIR) အတွက်ဆုံးမပဲ့ပြင်ပြီးနောက် = .260) ။
Task ကိုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (CS- vs CS +)
အေးစက်မှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (CS + vs CS-) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး၏ရလဒ်များသည်ဘယ်ဘက်ရှိ CS + ကိုတုံ့ပြန်မှုများတိုးလာသည် (x / y / z = -30 / -94 / -21; အများဆုံး z [z)max ကို] = 5.16; တညျ့ P [Pcorr] <.001) နှင့်လက်ျာ (x / y / z = 27 / -88 / -1; zmax ကို = 4.17; Pcorr <.001) occipital cortices ။ ထို့အပြင် ROI ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည် CS + နှင့်သက်ဆိုင်သော ventral striatum နှင့် occipital cortex နှင့် insula နှင့် OFC တို့တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း (CS +) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသော activation ကိုပြသခဲ့သည်။ဇယား ၁), အားလုံးသင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီး hemodynamic တုံ့ပြန်မှု၏အောင်မြင်သောအေးစက်ညွှန်ပြ။
CS + vs CS- (ဒေသ၏အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု) အတွက်ခြားနားမှုနှင့်အဓိကကွဲပြားမှု၏အဓိကသက်ရောက်မှုနှင့်အုပ်စုကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် Peox Voxels ၏ဇယား2ဒေသအလိုက်နှင့်စာရင်းအင်းများ*
တညျ့ P အဘိုး
စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု Ventral striatum L 19 -15 -1 -2 2.80 .045
ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု vs CSB Amygdala R 39 15 -10 -14 3.29 .012
CSB အုပ်စုတစ်စု vs ထိန်းချုပ်ရေး††
CSB = အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ = = စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား; L ကို = ကျန်ရစ် hemisphere; OFC = orbitofrontal cortex; R ကို = ညာဘက် hemisphere ။
*တံခါးခုံခဲ့ P <.05 (familywise အမှားအတွက်တည့်မတ်; SPM8 အရအသံအတိုးအကျယ်ဆုံး) အားလုံးကိုသြဒီနိတ် Montreal Neurological Institute အာကာသထဲမှာပေးထားတယ်။
Group မှကွာခြားချက်များ (CS- vs CS +)
အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. Two-နမူနာ t-စမ်းသပ်မှုလုံးဦးနှောက်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးမကွဲပြားမှုပြသပေမယ့်ပြပွဲ (လက်ျာဘက် amygdala အတွက်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် CSB အုပ်စု hemodynamic တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားလာခဲ့ပါPcorr CS- vs CS + များအတွက် = .012) (ဇယား ၁ နှင့် ဂဏန်း 2တစ်ဦးက), ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ CSB အုပ်စုသည် (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာတိုးမြှင့် Active မပြခဲ့ဘူးသော်လည်းPcorr အားလုံးနှိုင်းယှဉ်ဘို့> .05) ။
Panel ကိုတစ်ဦးက CS- vs ဟာဆနျ့ကငျြဘ CS + များအတွက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်တိုးချဲ့ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုသရုပ်ဖော်သည်။ Panel ကို B ကိုပုံဖော်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြား hemodynamic နားချင်းဆက်မှီဖြစ်စဉ်များလျော့နည်းသွားသည်။ အရောင်ဘားကဤဆနျ့ကငျြဘအဘို့အ t ကိုတန်ဖိုးများကိုသရုပ်ဖော်သည်။
Non-UCS vs UCS
Non-UCS vs UCS နှင့်စပ်လျဉ်းအုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုနှစ်ခုနမူနာ t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု CRS အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေမခံခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြ, ဒီဆနျ့ကငျြဘအဘို့အဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
appetitive အေးစက်သည့်ရလဒ်များအပြင် PPI ကို အသုံးပြု၍ ventral striatum, amygdala နှင့် vmPFC အကြားဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာရန်။ PPI သည်မျိုးပွားသော ROI နှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ ဤဒေသများသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ထကြွလွယ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသဖြင့် ventral striatum နှင့် amygdala တို့ကိုမျိုးစေ့ဒေသများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လုံးလုံး - ဦး နှောက်ရလဒ်များအမျိုးအနွယ်ဒေသနှင့်လက်ဝဲ prefrontal အဖြစ် ventral striatum အကြားနားချင်းဆက်မှီလျော့နည်းပြသ (x / y / z = -24/47/28; z = 4.33; Puncorr <.0001; x / y / z = -12 / 32 / -8; z = 4.13; Puncorr <.0001), ညာဘက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နှင့် prefrontal (x / y / z = 57 / -28/40; z = 4.33; Puncorr <.0001; x / y / z = -12 / 32 / -8; z = 4.18; Puncorr <.0001) ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု vs CSB အတွက် cortices ။ အဆိုပါ vmPFC ၏ ROI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် ventral striatum နှင့် vmPFC အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည် (x / y / z = 15/41 / -17; z = 3.62; Pcorr <.05; ဇယား ၁ နှင့် ဂဏန်း 2B က) ။ amygdala-prefrontal နားချင်းဆက်မှီအုပ်စုကွဲပြားမှုရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။
ဇယား (၃) Psychophysiologic Interaction (Peak Ventral Striatum) အုပ်စုကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ဒေသတွင်းနှင့်စာရင်းဇယားများ (ဒေသအကျိုးစီးပွားဆန်းစစ်ချက်)*
ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု vs CSB††
CSB အုပ်စုတစ်စု vs ထိန်းချုပ်ရေး vmPFC R 137 15 41 -17 3.62 .029
CSB = အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ = = စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား; R ကို = ညာဘက် hemisphere; vmPFC = ventromedial prefrontal cortex ။
ယခင်သီအိုရီအစာစားချင်စိတ်အေးစက်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ရောဂါမမှန်ချဉ်းကပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အရေးပါသောယန္တရားကြောင်း postulated ပါပြီ။16 ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် vmPFC အတူ ventral striatum နှင့် amygdala ၏ဆက်သွယ်မှုအတွက်အလားအလာရှိသောကွဲပြားခြားနားမှုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစာစားချင်စိတ်အေးစက်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးခြုံငုံအောင်မြင်သောစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်ညွှန်း, SCRs, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings နှင့်အသွေး ventral striatum, OFC အတွက်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု, occipital cortex နှင့် CS- vs အဆိုပါ CS + သို့ insula တိုးလာတွေ့ရှိရ ။
အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် amygdala အတွက် CS- vs CS + များအတွက်တိုးမြှင့ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုပြသ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် amygdala activation မကြာခဏထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်စွဲရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်တိုးပွားလာကြောင်းပြသတဲ့မကြာသေးမီ Meta-analysis သည်နှင့်အညီဖြစ်ပါသည်37 နှင့် CSB ၏အခြေအနေတွင်ထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်သောအခြားစိတ်ရောဂါမမှန်, အဘို့။ ထူးခြားသည် Meta-analysis သည်ကိုလည်း amygdala လူနာအတွက်တဏှာအဘို့သိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍအံ့သောငှါသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။37 ထို့အပြင် amygdala သင်ယူမှု signal ကို၏တည်ငြိမ်များအတွက်အရေးပါသောအမှတ်အသားရှိပါသည်။16 ထို့ကြောင့်လေ့လာတွေ့ရှိတိုးလာ amygdala reactivity ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါအဓိကတွေကို (CS +) သို့ယခင်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုပြန်ဆိုသော facilitated ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ Correlate အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆနဲ့အညီ, တိုးမြှင့ amygdala reactivity ကိုအများအပြားမူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်နှင့် Non-မူးယစ်ဆေး-related စိတ်ရောဂါမမှန်တစ်ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားအချက်ဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။56 ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းအစာစားချင်စိတ်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း activation amygdala တိုးပွားလာကြောင်း hypothesize နိုင် CSB ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မယ်။
ထို့ပြင်လက်ရှိရလဒ်တွေကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်အတွက် amygdala ၏ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးထင်ကြေးခွင့်ပြုပါ။ ကျနော်တို့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နှင့်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်အတွက် amygdala ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍကွဲပြားခြားနားသော CRS အတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့်ဖြစ်အံ့သောငှါယူဆ။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုးမြှင့်ထိတ်လန့်လွှဲခွင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအများဆုံးခိုင်လုံသော CRS တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် amygdala တို့ကအဓိကအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကွောငျ့အ amygdala Active ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နှင့် amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စဉ်အတွင်းတစ်ကြံ့ခိုင်တွေ့ရှိချက်များမှာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အခြေအနေများထိတ်လန့်လွှဲခွင်၏ချို့ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။57 ဆနျ့ကငျြ, amplitude startle စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နေစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားနှင့်ထိုကဲ့သို့သော (အဓိကအားဖြင့် amygdala ကလွှမ်းမိုးကြသည်မဟုတ်သည့်) လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သောအခြားတုံ့ပြန်မှုအဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအေးစက်ပိုမိုသင့်လျော်သောအမှတ်အသားများဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်။58 ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကွဲပြားခြားနားသော amygdala အရေးပါကြောက်ရွံ့စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်အတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြပြီး, အရှင်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော subsystem အစေခံနိုင်ဘူး။16
ထို့အပြင်ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် ventral striatum နှင့် vmPFC အကြားနားချင်းဆက်မှီလျော့နည်းသွားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့် prefrontal ဒေသများအကြားပြောင်းလဲနားချင်းဆက်မှီစိတ်လှုပ်ရှားမှု downregulation, ပစ္စည်းဥစ္စာမမှန်ခြင်း, Impulse ထိန်းချုပ်များ၏အခြေအနေတွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့ပြီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။43, 59, 60, 61 အများအပြားကလေ့လာမှုများအလုပ်မဖြစ်နားချင်းဆက်မှီဖြစ်စဉ်များတားစီးနှင့်မော်တာထိန်းချုပ်ချို့ယွင်းတစ် Correlate ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုခဲ့ကြသည်။41, 43 ဒါကြောင့်လျော့နည်းသွားနားချင်းဆက်မှီကြင်တားစီးထိန်းချုပ်ချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်ပြောင်းလဲဆက်သွယ်မှုဖေါ်ပြခြင်းယခင်ရလာဒ်များနှင့်အတူကိုက်ညီသည့်အလုပ်မဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။62
ကျနော်တို့အောင်မြင်သောအေးစက်ညွှန်း, ထိုအုပ်စုနှစ်စုအတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings နှင့် SCRs အတွက် CS + နှင့် CS- အကြားသိသာထင်ရှားသော differential လေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်ဒီနှစ်ခုတုံ့ပြန်မှုစနစ်များမအုပျစုကှဲပွားခွားနား။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အေးစက်သက်ရောက်မှု (CS + နှင့် CS- အကြားဆိုလိုသည်မှာအရေးပါသောကွဲပြားခြားနားမှု) ကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်အသားအဖြစ်မဟုတ်ဘဲအေးစက်အုပ်စုကွဲပြားမှုဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings သတင်းပို့သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအုပျစုကွဲပြားမှုအစာစားချင်စိတ်စဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings နှင့် SCRs အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်22, 23, 24 သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိ48, 53, 54, 63, 64, 65 အမျိုးမျိုးသောအုပ်စုများအကြားအေးစက်, အုပ်စုကွဲပြားမှုထိုကဲ့သို့သောထိတ်လန့်သို့မဟုတ်အသှေးကိုအောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခိုတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သောအခြားတုံ့ပြန်မှုစနစ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြသော်လည်း။22, 23, 24, 63 အထူးသ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမလုံလောက်အမှတ်အသားဖြစ်ဟန်ဒါပေမယ့်လည်းအတော်လေးထိုကဲ့သို့သောသုဉ်းသို့မဟုတ်လှမျးမိုးကဲ့သို့အခြားစမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေး၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအားဖြင့် uninfluenced ခံရဖို့မထင်သာ။66, 67 ကျနော်တို့သိသာသည့် CS + အကြားကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် CS- ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအုပျစု-မှီခိုသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ SCRs အတွက်တူညီတဲ့ရလဒ်ပုံစံလေ့လာသည်။ အခြားအတိုင်းတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုထင်ဟပ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပုံပေါ်သော်လည်းဤအတွေ့ရှိချက်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings နှင့် SCRs အေးစက်များအတွက်တည်ငြိမ်သောညွှန်းကိန်းအဖြစ်မှတ်စေခြင်းငှါစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ တဦးတည်းရှင်းပြချက်ကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings နှင့် SCRs အဓိကအား amygdala တုံ့ပြန်မှုများက innervated သောထိုကဲ့သို့သောအေးစက်ထိတ်လန့်လွှဲခွင်အဖြစ်တုန့်ပြန်စနစ်များ, မတူဘဲပိုမို amygdala-လွတ်လပ်သော (ဥပမာ, သို့မဟုတ် cortical ACC) ကဦးနှောက်ဧရိယာများစုဆောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။68 ဥပမာ, က SCRs အေးစက်ကြောင်းပြပေမယ့်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုအေးစက်မဟုတ်ခဲ့ပြီး amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ဖြစ်ကြသည်။69 အနာဂတ်လေ့လာမှုများအသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုစနစ်များ၏ dissociation များအတွက်အလားအလာတာဝန်ရှိအခြေခံယန္တရားစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်နှင့်အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်များအတွက်အရေးပါသောတိုင်းတာခြင်းအဖြစ်ထိတ်လန့်လွှဲခွင်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
ထို့အပြင်ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ SEM ကုအဆင့်ဆင့်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ် SEM ၏အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များပုံဖော်အတွက်တိုးချဲ့ SEM ကုအဆင့်ဆင့်၏အထွေထွေသက်ရောက်မှုများပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရဖို့ရန်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
တချို့ကကန့်သတ်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့အုပ်စုနှစ်စုအကြား ventral striatum အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ဒီတစျခုမှာရှင်းပြချက်မျက်နှာကျက်သက်ရောက်မှုအလားအလာအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပိုပြီးအခြားအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုထက်တိုးလာ dopaminergic ဂီယာနှိုးဆော်ခြင်းနိုင်သည်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။1, 58, 70 ထို့ပြင်၎င်းသည် vmPFC ရေတွင်းတစ်တွင်း-သတ်မှတ်ထားသောဒေသမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ခံစားမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော subdivisions ဆံ့အံ့သောငှါသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အခြားလေ့လာမှုများအတွက် vmPFC activation စပျစ်သီးပြွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်ပိုမိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် anterior ဖြစ်ပါတယ်။43 အဆိုပါ vmPFC ထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဖြစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောကွောငျ့ထိုကွောငျ့, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်အများအပြားဖြစ်စဉ်များရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျခုနှစ်, လေ့လာတွေ့ရှိတိုးချဲ့ amygdala လှုပ်ရှားမှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလျော့နည်းသွား ventral striatal-PFC နားချင်းဆက်မှီ CSB ၏ etiology နှင့်ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များတရားဝင်ကြားနေတွေကိုနှင့်လိင်သက်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များထူထောင်ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့သလိုပဲ။ ထို့ကြောင့်ဤဘာသာရပ်များချဉ်းကပ်အပြုအမူထုတ်ယူကြောင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရဖို့ပိုများပါတယ်။ ဒီ CSB စေပါတယ်သို့မဟုတ် CSB ၏ရလဒ်အနာဂတ်သုတေသနများကဖြေကြားရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ။ ထို့အပြင်လျော့နည်းသွား ventral striatal-prefrontal နားချင်းဆက်မှီတွင်ထင်ဟပ်နေသောချို့ယွင်းစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်များ, နောက်ထပ်ပြဿနာအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုထောကျပံ့ပေလိမ့်မည်။ လက်တွေ့သက်ရောက်မှုမှလေးစားမှုနဲ့အတူကျနော်တို့သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့နှင့် ventral striatum နှင့် vmPFC အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ အလုပ်မဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖြစ်စဉ်များသင်ယူခြင်းသင်တန်းနည်းပြအစာစားချင်စိတ်အောင်မြင်သောကုသမှုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအမြင်နှင့်အညီ, မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များပြောင်းလဲ ventral striatal-PFC နားချင်းဆက်မှီသိသိသာသာ relapse ၏အလေးသာတိုးမြှင့်နိုင် postulated ပါပြီ။71 ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းကိုအာရုံစိုက်စေတဲ့ကုသမှုတွေဟာ CSB အတွက်ထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ညွှန်ပြနိုင်တယ်။ ဒီရှုထောင့်ကိုထောက်ခံတဲ့အထောက်အထားကဒီလေ့လာသင်ယူမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအခြေခံထားတဲ့သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးဟာရောဂါများစွာအတွက်ထိရောက်တဲ့ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။72 ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် CSB ၏အခြေခံယန္တရား၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်၎င်း၏ကုသမှုများအတွက်အလားအလာသက်ရောက်မှုတွေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တိ Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; ဇန်နဝါရီ Schweckendiek; Rudolf Stark
တိ Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; ဇန်နဝါရီ Schweckendiek
တိ Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; ဇန်နဝါရီ Schweckendiek; Onno Kruse; Rudolf Stark
အဆိုပါ Completed အပိုဒ်၏နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်
Georgiadis, JR, Kringelbach, ML လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ: ကအခြားအပျော်အပါးမှလိင်ချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ပုံရိပ်သက်သေအထောက်အထား။ prog Neurobiol. 2012;98:49-81.
Karama, အက်စ်, Lecours, AR, Leroux, ဂျေ et al, ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ဒေသများတွင်။ Hum ဦးနှောက် Mapp. 2002;16:1-13.
Kagerer, အက်စ်, Klucken, တီ, Wehrum, အက်စ် et al, လိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ကွဲအထီးအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံကြော activation ။ J Sex Med. 2011;8:3132-3143.
| အပြည့်အဝစာသား PDF ဖိုင်ရယူရန်
Kagerer, အက်စ်, Wehrum, အက်စ်, Klucken, T. et al, လိင်ဆွဲဆောင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ PLoS တစ်ခုမှာ. 2014;9:e107795.
Kühn, အက်စ်, Gallinat, ဂျေ cue- သွေးဆောင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအပေါ်တစ် ဦး ကအရေအတွက် Meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J Sex Med. 2011;8:2269-2275.
Wehrum, အက်စ်, Klucken, တီ, Kagerer, အက်စ် et al, ကျားဆင်တူရိုးမှားနှင့်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J Sex Med. 2013;10:1328-1342.
Wehrum-Osinsky, အက်စ်, Klucken, တီ, Kagerer, အက်စ် et al, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများ၏တည်ငြိမ်မှု: ဒုတိယတစ်ချက်မှာ။ J Sex Med. 2014;11:2720-2737.
Buchuk, ဃ ယူကေအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း nan - ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ porn ကိစ္စ၏ဝက်ဘ်အသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ ; 2013 (: မှာရရှိနိုင်)
(ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2016).
ပေါလုက, ခ, ရှိန်းပြား, JW လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများ။ int J ကိုလိင်ကျန်းမာရေး. 2008;20:187-199.
Barth, RJ, အကြင်နာတရား, BN လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ၏ mislabeling ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther. 1987;13:15-23.
Coleman, အီး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ J ကို Psychol လူ့လိင်. 1991;4:37-52.
Goodman, အေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther. 1993;19:225-251.
Kafka, အမတ် Nonparaphilic hypersexuality ရောဂါ။ အတွင်း: YM Binik, SK ကိုခန်းမ (Eds ။ ) အခြေခံမူများနှင့်လိင်ကုထုံး၏အလေ့အကျင့်. 5th ed ။ အဆိုပါ Guilford စာနယ်ဇင်း, New York ; 2014:280-304.
Levine, အမတ်, Troiden, RR လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ဒဏ္ဍာရီ။ J Sex Res. 1988;25:347-363.
Ley, ဃ, Prause, N. , ဖင်လန်, P. ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်ရှိပါတယ်: ကို 'ညစ်ညမ်းစွဲ' 'မော်ဒယ်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်။ Curr လိင်ကျန်းမာရေးကိုယ်စားလှယ်. 2014;6:94-105.
မာတင်-Soelch, C တို့, Linthicum, ဂျေ, Ernst, အမ် အစာစားချင်စိတ်အေးစက်: အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများနှင့် psychopathology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ neuroscience Biobehav ဗြာ. 2007;31:426-440.
Winkler, MH, Weyers, P. , Mucha, RF et al, ဆေးလိပ်သောက်ဘို့အေးစက်တွေကိုကျန်းမာဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူ။ Psychopharmacology. 2011;213:781-789.
, အက်စ်, Brauer, အမ်, Laan, အီးနှစ်ဦးစလုံး အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနျ Classical အေးစက်: တစ်ပွားလေ့လာမှု။ J Sex Med. 2011;8:3116-3131.
brom, အမ်, Laan, အီး, Everaerd, ဒဗလျူ et al, conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုး။ PLoS တစ်ခုမှာ. 2014;9:e105955.
Kirsch, P. , Schienle, အေ, Stark, R. et al, ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related fMRI လေ့လာမှု: တစ် nonaversive differential ကိုအေးစက်ပါရာဒိုင်းနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်။ Neuroimage. 2003;20:1086-1095.
Kirsch, P. , Reuters, အမ်, Mier, ဃ et al, imaging ဗီဇ-ပစ္စည်းဥစ္စာ interaction က: အ DRD2 TaqIA polymorphic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အပေါ် dopamine agonist bromocriptine ။ neuroscience လက်တ. 2006;405:196-201.
Klucken, တီ, Schweckendiek, ဂျေ, Merz, CJ et al, conditional လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဝယ်ယူများ၏အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J Sex Med. 2009;6:3071-3085.
Klucken, တီ, Wehrum, အက်စ်, Schweckendiek, ဂျေ et al, အဆိုပါ 5-HTTLPR polymorphic စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နေစဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Hum ဦးနှောက် Mapp. 2013;34:2549-2560.
Klucken, တီ, Kruse, O. , Wehrum-Osinsky, အက်စ် et al, အစာစားချင်စိတ်အေးစက်နှင့် amygdala / prefrontal ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုအပေါ် COMT Val158Met-polymorphic ၏သက်ရောက်မှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp. 2015;36:1093-1101.
Klucken, တီ, Kagerer, အက်စ်, Schweckendiek, ဂျေ et al, အာရုံကြောတစ်ရုပ်ပုံ-ရုပ်ပုံအေးစက်ပါရာဒိုင်းကာလအတွင်းအရေးပေါ်သတိထားမိခြင်းနှင့်သတိမထားမိဘာသာရပ်များအတွက် electrodermal နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပုံစံများ။ neuroscience. 2009;158:721-731.
Klucken, တီ, Tabbert, K. , Schweckendiek, ဂျေ et al, လူ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်အရေးပေါ်သင်ယူမှုအတွက် ventral striatum ပါဝငျသညျ။ Hum ဦးနှောက် Mapp. 2009;30:3636-3644.
LaBar, KS, Gatenby, CJ, ဂိုး, JC et al, Conditions ကိုကွောကျရှံ့ရှာမှီးခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းလူ့ amygdala ကို Activation: တစ်ရောနှော-ရုံးတင်စစ်ဆေး fMRI လေ့လာမှု။ အာရုံခံဆဲလျ. 1998;20:937-945.
ကိုးလ်, အက်စ်, Hobin, အမတ်, Petrovich, GD အစာစားချင်စိတ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု cortical, striatal နှင့် hypothalamic ဒေသများနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားကွန်ယက်ကိုစုဆောင်းလေ့ကျင့်။ neuroscience. 2015;286:187-202.
Gottfried, ဂျာ O'Doherty, ဂျေ, Dolan, RJ လူသားတွေအတွက်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိ olfactory သင်ယူမှုဖြစ်ရပ်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ J ကို Neurosci. 2002;22:10829-10837.
McLaughlin, RJ, Floresco, SB အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်မျိုးသုဉ်းအတွက် basolateral amygdala ၏ကွဲပြားခြားနားသောငျဒသေ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience. 2007;146:1484-1494.
Sergerie, K. , Chochol, C တို့, Armony, JL စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကို: အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများတစ်အရေအတွက် Meta-analysis သည်။ neuroscience Biobehav ဗြာ. 2008;32:811-830.
Setlow, ခ, Gallagher, အမ်, ဟော်လန်, PC ကို အဆိုပါ amygdala ၏ basolateral ရှုပ်ထွေးဝယ်ယူပေမယ့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian ဒုတိယယူမှုကိုအေးစက်အတွက် CS စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးမစကားရပ်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ EUR J ကို neuroscience. 2002;15:1841-1853.
Setlow, ခ, ဟော်လန်, PC မှာ, Gallagher, အမ် အဆိုပါ basolateral amygdala ရှုပ်ထွေးပြီးနျူကလိယ၏အဆက်ဖြုတ်ချို့ယွင်း pavlovian ဒုတိယယူမှုကိုအေးစက်တုံ့ပြန်မှု appetitive accumbens ။ ပြုမူနေ neuroscience. 2002;116:267-275.
Seymour, B. , O'Doherty, JP, Koltzenburg, M. et al, ပြိုင်ဘက်စာစားချင်စိတ်ကို-ဆန္ဒရှိအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များနာကျင်မှုသက်သာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သင်ယူမှုအခြေခံ။ နတ် neuroscience. 2005;8:1234-1240.
Politis, အမ်, ချေးငွေများ, C တို့, Wu, K. et al, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက်ကို. 2013;136:400-411.
Voon, V. , မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P. et al, အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PLoS တစ်ခုမှာ. 2014;9:e102419.
Chase, HW, Eickhoff, SB, Laird, AR et al, မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: တစ်ဦးကို Activation ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း Meta-analysis သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု. 2011;70:785-793.
Kühn, အက်စ်, Gallinat, ဂျေ ဥပဒေရေးရာနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ-တစ် cue-reactivity ကိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် Meta-analysis သည်ကိုဖြတ်ပြီးတဏှာ၏ဘုံဇီဝဗေဒ။ EUR J ကို neuroscience. 2011;33:1318-1326.
မိုင်းလုပ်သား, MH, Raymond, N. , Mueller, BA ဘွဲ့ et al, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res. 2009;174:146-151.
Volkow, ND, မုဆိုး, JS, ဝမ်, G. အ အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ J Clin Invest. 2003;111:1444-1451.
Courtney, Ke, Ghahremani, DG, Ray, LA က အရက်မှီခိုအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးနေစဉ်အတွင်းနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။ စှဲလမျးသူ Biol. 2013;18:593-604.
Jimura, K. , Chushak, MS, Braver, TS ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုမှု၏အာရုံကြောဒိုင်းနမစ်ဆက်စပ် intertemporal ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း Impulse နှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှု။ J ကို Neurosci. 2013;33:344-357.
Diekhof, ek, Gruber, O. အလိုဆန္ဒအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူတိုက်မိသည့်အခါ: anteroventral prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ interaction ကထကြွလွယ်သောအလိုဆန္ဒများကိုတှနျးလှနျဖို့လူ့စွမ်းရည်ကိုအခြေခံ။ J ကို Neurosci. 2010;30:1488-1493.
Laier, C တို့, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ် တစ်သိမြင်-အပြုအမူအမြင်ကနေကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များပေါ်တွင်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လိင်စွဲ compulsive. 2014;21:305-321.
Phelps, EA ၏, Delgado, MR, အနီး KI et al, လူသားတွေအတွက်သင်ယူမှုမျိုးသုဉ်း: အ amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် vmPFC ။ အာရုံခံဆဲလျ. 2004;43:897-905.
Benedek, အမ်, Kaernbach, C. phasic electrodermal လှုပ်ရှားမှု၏တစ် ဦး ကစဉ်ဆက်မပြတ်အတိုင်းအတာ။ J ကို Neurosci နည်းလမ်းများ. 2010;190:80-91.
Klucken, တီ, Schweckendiek, ဂျေ, Koppe, G. အ et al, အာရုံကြော disgust- ကွောကျမကျအေးစက်တုံ့ပြန်မှုများဆက်နွယ်နေပါသည်။ neuroscience. 2012;201:209-218.
Klucken, တီ, လက်ဇန်းဒါး, N. , Schweckendiek, ဂျေ et al, 5-HTTLPR နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များတစ် function ကိုအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏အာရုံကြောဆက်စပ်အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု. 2013;8:318-325.
Schweckendiek, ဂျေ, Klucken, တီ, Merz, CJ et al, counterconditioning ၏အာရုံခံဆက်စပ်မှု: ရွံရှာကြိုက်နှစ်သက်ဖို့သင်ယူခြင်း။ တပ်ဦး Hum neuroscience. 2013;7:346.
Walter, ခ, Blecker, C တို့, Kirsch, P. et al, Marina: အကျိုးစီးပွားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ဒေသကြီးများအတွက်မျက်နှာဖုံး၏ဖန်တီးမှုအဘို့အ tool ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသော။ (လူ့ဦးနှောက်၏ Functional မြေပုံပေါ်တွင် 9th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ။ CD-ROM ကိုပေါ်ရရှိနိုင်)Neuroimage. 2003;19.
Hermann, အေ, Schäfer, အေ, ဝေါလ်တာ, ခ et al, ပင့်ကူ phobia အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း: အ medial prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု. 2009;4:257-267.
Klucken, တီ, Schweckendiek, ဂျေ, Merz, CJ et al, ရွံရှာသုဉ်းအတွက်အာရုံခံ, electrodermal နှင့်အကဲဖြတ်တုံ့ပြန်မှု၏ Dissociation ။ ပြုမူနေ neuroscience. 2013;127:380-386.
Klucken, တီ, Schweckendiek, ဂျေ, Blecker, C. et al, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုများ၏ 5-HTTLPR နှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်အကြားအသင်းအဖွဲ့။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု. 2015;10:700-707.
Klucken, တီ, Kruse, O. , Schweckendiek, ဂျေ et al, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုနှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ဖိနှိပ်ဖြေရှင်းစတိုင်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience. 2015;9:132.
Gitelman, DR, ပဲန်နီ, WD, Ashburner, ဂျေ et al, hemodynamic deconvolution ၏အရေးပါမှု: fMRI အတွက်ဒေသတွင်းနှင့် psychophysiologic interaction ကမော်ဒယ်။ Neuroimage. 2003;19:200-207.
Jasinska, AJ, Stein, EA ၏, Kaiser, ဂျေ et al, စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကိုပြောင်းလဲပစ်အချက်များ: လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခု။ neuroscience Biobehav ဗြာ. 2014;38:1-16.
LaBar, KS, LeDoux, je, Spencer, DD et al, လူသားတွေအတွက်တစ်ဖက်သတ်ယာယီ lobectomy အောက်ပါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ချို့ယွင်း။ J ကို Neurosci. 1995;15:6846-6855.
brom, အမ်, နှစ်ဦးစလုံး, အက်စ်, Laan, အီး et al, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အေးစက်, သင်ယူမှုနှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများတစ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ. 2014;38:38-59.
Motzkin, JC, Baskin-Sommers, အေ, Newman က, JP et al, အာရုံကြောပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆက်နွယ်နေပါသည်: ဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်အခြေခံဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျှော့ချ။ Hum ဦးနှောက် Mapp. 2014;35:4282-4292.
Motzkin, JC, ဖိလိပ္ပု, CL, Wolf က, RC et al, Ventromedial prefrontal cortex လူသားတွေအတွက် amygdala လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု. 2015;77:276-284.
Cilia, R. , ချို, အက်စ်အက်စ်, ဗန် Eimeren, T. et al, လမ်းကြောင်းတစ်ခုမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အဆက်ဖြုတ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ MOV disorders. 2011;26:225-233.
Lorenz, RC, Krüger, ဂျေ, နျူမန်, ခ et al, Cue reactivity ကိုနှင့်ရောဂါဗေဒကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားသူအတွက်၎င်း၏တားစီး။ စှဲလမျးသူ Biol. 2013;18:134-146.
Lonsdorf, တီဘီ, ဝိတ်, AI အ, Nikamo, P. et al, လူ့ကွောကျရှံ့သောသင်ယူမှုနှင့်မျိုးသုဉ်း၏မျိုးဗီဇ Gates: စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါအတွက်မျိုးဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်အဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဂယက်ရိုက်။ Psychol သိပ္ပံ. 2009;20:198-206.
မိက္ခေလတီ, Blechert, ဂျေ, Vriends, N. et al, ထိတ်လန့်ရောဂါအတွက်ကြောက်လန့်အေးစက်: သုဉ်းဖို့မြှင့်တင်ရန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ J ကိုမူမမှန် Psychol. 2007;116:612-617.
Olatunji, bo, Lohr, JM, Sawchuk, CN et al, UCSs အဖြစ် CSS နှင့်ကွောနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ရုပ်ပုံများအဖြစ်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေအသုံးပြုခြင်း: သွေးဆေးထိုး-ဒဏ်ရာ phobia အတွက်ကြောက်ရွံ့ရွံရှာ၏အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်သင်ယူမှု။ J ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု. 2005;19:539-555.
Dwyer, DM, Jarratt, အက်ဖ်, Dick, K. USS အဖြစ် CSS နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးစုံအဖြစ်အစားအစာများနှင့်အတူအကဲဖြတ်အေးစက်: အဘယ်သူမျှမလိင်ကွဲပြားမှုအဘို့သက်သေသာဓက, မျိုးသုဉ်း, ဒါမှမဟုတ်လှမျးမိုး။ Cogn Emotion. 2007;21:281-299.
Vansteenwegen, ဃ, Francken, G. အ, Vervliet, ခ et al, အကဲဖြတ်အေးစက်အတွက်မျိုးသုဉ်းရန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြုမူနေ Res Ther. 2006;32:71-79.
Hamm, AO, ဝိတ်, AI အ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သင်ယူမှုကြောက်စည်းမျဉ်းများ၏ neuropsychology ။ int J ကို Psychophysiol. 2005;57:5-14.
ဝိတ်, AI အ, Hamm, AO, Schupp, HT et al, conditional ထိတ်လန့်အလားအလာများ dissociation နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသင်ယူမှု: တစ်ဖက်သတ်ယာယီ lobectomy အောက်ပါကြောက်လန့်အေးစက်။ J ကို Neurosci. 2005;25:11117-11124.
Georgiadis, JR, Kringelbach, ML, Pfaus, JG ပျော်စရာအဘို့လိင်: လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန် neurobiology တစ်ဦးပေါင်းစပ်။ နတ်ဗြာ Urol. 2012;9:486-498.
Volkow, ND, Baler, RD အရက်စွဲအတွက် relapse ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ biomarkers imaging ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2013;70:661-663.
Hofmann, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Asnaani, အေ, Vonk, IJJ et al, သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံး၏ထိရောက်မှု: Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏သုံးသပ်ချက်။ Cogn Ther Res. 2012;36:427-440.
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဒီလေ့လာမှုကဂျာမန်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (STA 475 / 11-1) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်